China CE depụtara Nrụpụta Ọpụpụ Mpụga Mpụga nke Mberede na ụlọ ọrụ | Saselux
Uko ụlọ arịọnụ
① [CE Certified] SASELUX duru ndị ọrụ mberede na -agba ọsọ nwoke na -enwu ọkụ ka amatala ihe asambodo CE. Ihe na-egbochi ọkụ, ụlọ thermoplastic na-akpụzi, ọkọlọtọ maka ọkụ ọkụ mberede, ike na akụrụngwa.
② [Akwụkwọ ikike afọ 5] Akara akara ọpụpụ nke SASELUX agafeela asambodo CE. Anyị na -ekwe nkwa akwụkwọ ikike afọ 5 maka akụkụ eletriki na ụlọ, akwụkwọ ikike afọ abụọ maka batrị. Mgbapụta mpụga mberede a anyị nwere ọrụ ire ere. Ọ bụrụ na afọ ejughị gị maka ihe ọ bụla, pls kpọtụrụ anyị ma anyị ga -enye gị ọrụ afọ ojuju. Ogo dị elu na ọnụ ala dị ala bụ ọrụ anyị kacha elu.
③ [50000 Awa ndụ & ọkụ dị elu] Batrị maka nkwado ndabere na mpaghara ejiri ọkụ mberede a nwere akara nwere ike gbanye ugboro 300 wee rụọ ọrụ maka nkeji 27000 opekata mpe. Ịkwụ ụgwọ zuru oke ọ bụla nwere ike iji maka ọrụ mberede nkeji 180. Biko mara na ekwesịrị ịgbanye ọkụ mberede a. Na ndụ nke akara ọpụpụ a bụ awa 50000.
④ [Ọdịdị dị elu] Ogo kacha mma bụ nkwa onye ahịa ọ bụla. Akara ọpụpụ ọkụ a bụ nke THERMOPLASTIC ABS HOUSING. Nke a agaghị aka nká mgbe ejiri ogologo oge wee hụ na ihe ọ bụla siri ike n'oge nrụnye na mgbakọ. Bọtịnụ ule ejiri ọkụ ọkụ mberede a emeela ule 1000 iji hụ na ọkụ mberede nwere ike ịgba ọkụ na -akpaghị aka n'oge ike adịghị, bọtịnụ ule agaghị ada ada mgbe ike lọghachitere.
[Banyere SASELUX] SASELUX hiwere na 2011, nwere ahụmịhe bara ụba na nrụpụta butere ọkụ mberede na ngwaahịa eletriki ruo ọtụtụ afọ. Dị ka akara gburugburu na-etinye aka na mmepe, mmepụta, ire na ọrụ ọkụ na ngwaahịa eletriki maka ahịa n'ụwa niile, anyị na-etinye teknụzụ teknụzụ na nhazi ngwaahịa na usoro nrụpụta. SASELUX na -ere nde ngwaahịa elektrik 70 kwa afọ. Ugbu a, anyị nọ ebe a maka gị oge niile, yana ngwaahịa kacha mma.
Nke gara aga: Ihe ịrịba ama ọpụpụ ọpụpụ kacha ewu ewu na Australia
Osote: Uko ụlọ ma ọ bụ ịkwụnye ihe nrịba ọpụpụ ọpụpụ na -ewu ewu na Europe
Mmemme ọkụ ọkụ mberede azụmahịa
Mkpa ọkụ mberede
Wepụ ihe ịrịba ama na ọkụ